Arsenal ayaa guul ay ku raaxeysatay ka gaartay Burnley kaddib markii ay ku garaaceen 3-1. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Arsenal ayaa guul ay ku raaxeysatay ka gaartay Burnley kaddib markii ay ku garaaceen 3-1.
( Premier League ) 22 Dis 2018.
Kullanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-0 oo ay ku hogaamineysay Gunners, waxaana hogaanka u dhiibay Aubameyang oo dhameystiran caawin uu ka helay dambeedka bidix ee Sead Kolasinac waxaana fursada goolkaa kal hore soo abuuray Mesut Ozil.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad Arsenal ayaa dardar xoogan kusoo gashay waxaana durba dhacday iney dheereystaan hogaanka dheesha.
Markii qeybta labaad kullanka ay socotay seddax daqiiqo kaliya markale Aubameyang ayaa goolkiisa labaad ee dheesha dhaliyay markii uu darbad xoogan goolka ku hubsaday taa oo caawinteeda uu ka helay weeraryahanka kulamaanaa cayaarte ee Alexandre Lacazette.
Intaa kaddib kooxda martida ayaa gool iska soo celisay oo waxaan goolka calanka u dhaliyay Ashley Barnes kaddib kubbad uu ka helay afaafka hore ee goolka Arsenal.
Balse waxaa ugu dambeyn quus u diray Burnley alex Iwobi oo dhammaadka kullanka dhaliyay goolka seddaxaad ee Arsenal waana guushii u horreeysay ee Arsenal kaddib laba kullan oo xariira oo ay kooxdu qasaartay dhammaan tartamada.
Dhanka kale labada gool uu dhaliyay Aubameyang ayaa ka dhigan inuu haatan kala wareegay dhanka kal sarenta gool dhalinta weeraryahanka Liverpool Maxamed Saalax oo 11-gool ololahan dhaliyay halka wiilka kasoo jeeda Gabon uu lee yahay 12-gool.
Arsenal ayaa guul ay ku raaxeysatay ka gaartay Burnley kaddib markii ay ku garaaceen 3-1. added by admin on December 22, 2018